सचिवालय बैठकमा ओलीले भने : " मैले प्रचण्डलाई हट्न भने के हुन्छ ?" (पूर्णपाठ) - Demo Khabar
सचिवालय बैठकमा ओलीले भने : " मैले प्रचण्डलाई हट्न भने के हुन्छ ?" (पूर्णपाठ)
काठमाडौँ, मंसिर । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबारको सचिवालय बैठकमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावलाई ‘त्यो प्रस्ताव नै नभएको’ बताएका छन् ।
‘एउटा अध्यक्षलाई जानकारी नभइकन अर्का अध्यक्षले कुनै पनि प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन । त्यस्तो दिनुपर्ने पनि कुनै अवस्था आउला, तर अर्का अध्यक्षलाई जानकारी नै नदिइकन, अर्का अध्यक्षमाथि हमला, प्रहार, आलोचना, आरोप र अभियोगसहितको प्रस्तावका नाममा अचानक त्यो मलाई दिनुभयो’, ओलीले भनेका छन् ।
त्यस्तै उनले प्रचण्डको प्रस्तावबारे भनेका छन्, ‘ तर, त्यो बैठकमा प्रस्तुत भएको प्रस्ताव होइन । त्यसलाई विधिसम्वत प्रस्ताव भन्न मिल्दैन । तर, त्यस सम्बन्धमा कमिटीमा छलफल आवश्यक छ ।
त्यो प्रस्ताव भनेर जो वितरण भयो, त्यसपछि जुन अखवारबाजी गरियो । यसो गर्नु उचित भयो कि भएन ?’ त्यस्तै ओलीले झूठा अभियोग र लाञ्छनाहरु सहन्छु भन्ने नसांचे हुन्छ, उचित जवाफ दिन्छु भनेर चेतावनी पनि दिएका छन् ।
म के भन्न चाहन्छु भने, मिलेर मात्रै पार्टी बचाउन सकिन्छ । लडेर पार्टी बच्दैन, जालझेल र तिकड्म गरेर पार्टी बच्दैन । गुटबन्दी गरेर पार्टी बच्दैन । सबै कुराहरुमा पछि छलफल गरौंँला । आजचाहिँ म त्यो लाञ्छनापत्र, जो मलाई दिइएको थियो, त्यस पत्रका सम्पूर्ण आरोपहरु, अभियोगहरु, लाञ्छनाहरु, तिरस्कारहरु, अपमानहरु सबैलाई खारेज गर्छु । र, यो मेरो राजनीतिक जीवन नै सिध्याउने गरी ल्याइएको आरोपपत्रलाई म पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्छु । त्यसको यथोचित जवाफ म लिखित रुपमा नै प्रस्तुत गर्नेछु । मैले त्यो पत्रले परिस्थिति अलिक गम्भीर मोडमा पु¥यायो भनेर माधब कमरेडलाई भनेँ । उहाँले अँ धम्काउने ? धम्काएर कोही डराउँदैन भन्नु भयो । अब डराउने खालको त यहाँ कोही छजस्तो लाग्दैन । माधब कमरेड मात्रै नडराउने होइन, अरु पनि कोही डराउलानजस्तो लाग्दैन । कोही पनि डराउदैनन् । यस्तै राजनीति गरेर आएका मान्छेहरु कोही डराउलानजस्तो लाग्दैन । तर सबै सुरैसुरा हुँदाखेरि सुरैचाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण कति हुन्छ र कति हुँदैन ? फेरि पनि विचार गर्न मेरो आग्रह छ ।
र जुन लाञ्छनाहरु लगाइएका छन्, ती हल्काढंगले लगाइएको रुपमा मैले लिएको छैन । यो अवश्य नै अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लगाइएको छ । राजनीतिमा जुनसुकै कुरा आइपरे पनि सहन हुनुपर्ने नै हुन्छ ? म त जेलनेल, कुटाइ, यातना सबै भोगेर आएको छु । लाठी, बुट, जुत्ता मैले भोगेर आएको छु । ती सबै कुरा भोगिएको छ भने अँ, फेरि पनि कुनै परिस्थिति भोग्न मलाई कुनै कठिनाइ छैन । त्यो पत्रका प्रस्तोता र त्यसको पृष्ठभूमिमा रहेका साथीहरुले कुन बाटोबाट जाने च्वाइस गर्नुस् ।
(पार्टी सचिवालयको २०७७ मंसिर ३ गते बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकको अध्यक्षता गर्दै ओलीले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
बिहिवार, मंसिर ४ २०७७११:५४:२५
तनहुँ घटना : "सरकार अधिनायकवाद तर्फ उन्मुख, २९ मा देशभर प्रदर्शन गर्ने "